State Counsellor, Indonesian FM exchange views on recent development in Rakhine State – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
State Counsellor, Indonesian FM exchange views on recent development in Rakhine State
Minister of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, Mrs. Retno L.P. Marsudi paidaworking visit to Myanmar from 6th to 7th December 2016. During the visit, State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs Daw Aung San Suu Kyi received the visiting Foreign Minister at (20:15) hours on 6th December. A dinner was hosted by the State Counsellor in honour of the visiting Minister at her residence in Nay Pyi Taw. Minister of State for Foreign Affairs U Kyaw Tin and Indonesian Ambassador to Myanmar Dr. Ito Sumardi also attended the dinner.
During the meeting, the two sides exchanged views on strengthening of bilateral relations and cooperation as well as on recent developments in Rakhine State in an open and friendly manner. Indonesia has expressed its readiness to provide health care and humanitarian assistance for both communities and to enhance communication channels between the two countries.
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Mrs. Retno L.P. Marsudi သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၆) ရက်နေ့မှ (၇) ရက်နေ့အထိ အလုပ်သဘောခရီး လာရောက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါခရီးစဉ်အတွင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား ၆-၁၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့ (၂၀း၁၅)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ၎င်း၏နေအိမ်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ပြီး၊ ညစာစားပွဲဖြင့် ဧည့်ခံခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ညစာစားပွဲသို့ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အင်ဒိုနီးရှား သံအမတ်ကြီး Dr. Ito Sumardi တုိ့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
ယင်းသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့အကြား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနှင်‌့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေးကိစ္စများ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု အ‌ခြေအနေတို့နှင်‌့ပတ်သက်၍ အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပြီး၊ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ် မှ အသိုင်းအဝန်းနှစ်ခုတို့အတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အကူအညီနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကူညီစောင့်ရှောက်မှု အကူအညီများ ပေးအပ်ရေးကိစ္စ၊ နှစ်နိုင်ငံအကြား ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းမှု များတိုးမြှင်‌့ပြုလုပ်ရေးကိစ္စတို့ကို ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၇ ရက်